I-OEM Bamboo Umququzeleli weDrowa eYandiswayo yoMvelisi weZixhobo zoMvelisi kunye neFactory | Nero
Igama leMveliso: I-Bamboo Eyongezelelekileyo yeDrowa Umququzeleli kuMphathi weZixhobo
Ubunzima: malunga ne-1.5kg
Ubungakanani : 44 x 50 x5 ; 40 x 34 x4 ; 39 x 36 x5 ( L x W x H)
I-1 yomququzeleli wedrowa eyandisiweyo ye-bamboo.
Isilumkiso: Lumka ukuba ucinezelwe xa usanda.
Umququzeleli ofanelekileyo wedrowa enzulu yokusetyenziswa yonke imihla. Isebenza kakuhle, uyilo lobuhle iyenza ibe yeyona nto ilungileyo yokuhombisa ikhaya lakho. Yeka ukukhangela abaququzeleli abasemgangathweni kunye nemigqomo yokugcina xa uzama umququzeleli wethu wedrowa ye-bamboo. Ilungele ikhaya, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, kunye nombutho wedrowa yeofisi.
Ukusetyenziswa kweeNjongo ezininzi: Lo mququzeleli wedrowa unokusetyenziselwa ukugcina izinto ezincinci ezinje ngeentsimbi, ubucwebe, izinto zokubhala kunye nezixhobo. Ingasetyenziswa ekhitshini, kwigumbi lokuhlala, igumbi lokulala, kunye negumbi eliluncedo njl njl. Ilungele ukusetyenziswa kwezinto ezininzi kwizihlandlo ezininzi.
Umququzeleli wesixhobo ekwandiswayo kunye nokulungiswayo: Eyilwe ngamacandelo angama-6-8, umququzeleli unokugcina indawo ngelixa ehlala izinto ezininzi, ezinokwandiswa ukusuka kwi-13 intshi ukuya kwi-19.6 intshi ububanzi kunye ne-sliding egudileyo.
Uqalo olugqibeleleyo olugqibeleleyo: I-bamboo cutlery tray ibonakala icocekile kwaye intle. Ngokungafaniyo nabanye abavelisi, abaququzeleli bethu bezixhobo ze-bamboo bavunwa ekukhuleni okupheleleyo ukonyusa amandla. Kuwe, oko kuthetha ukuba lo mququzeleli wePipishell unokuhlala nje ixesha elide kunedrowa yakho.
Ukugcinwa okuSebenzayo kunye nokuPheleleyo: Lo mququzeleli we-bamboo unokugcina izinto ezincinci ezibhidayo ngamacandelo. Kulula ukukhetha izinto, kunokonga ixesha lokujonga izinto ezinje ngeecephe kunye neemela, iipeni kunye neerula, intsimbi yomqala kunye newotshi.
Ulwakhiwo olomeleleyo kunye noLondolozo oluLula: Lo mququzeleli wedrowa yezixhobo zasekhitshini womelele ngokwaneleyo ukuba angagcina endaweni. Kwaye lo mququzeleli we-bamboo unokusulwa ngokukhawuleza ngamanzi afudumele kwaye asule ngokulula ngelaphu elimanzi.
Ngaphambili: Nero Adjustable Bamboo Drawer izahluli
Okulandelayo: Nero Bamboo 7 tier Plant Stand